Iflethi ekwicomplex ekwindawo entle - I-Airbnb
Iflethi ekwicomplex ekwindawo entle
Intle, iflethi enamagumbi amabini kumgangatho ophezulu, +ilifti. Igumbi lokulala elikhulu, eliqaqambileyo elinebhedi eyi-160cm. Ifanelekele abantu abayi-2, kodwa ukuba bayi-3, kukho nesofa onokulala kuyo. I-Wifi nekhitshi elinezinto onokuzisebenzisa.
Indawo intle kwaye ithule, ineevenkile ezincinci, iikhefi kunye neevenkile zokutyela. Enye yezona ndawo zindala zeStockholms edibene kufutshane nesiphakathi sesixeko.
Imetro iza kukusa eSödermalm kwiindawo eziyi-2 kuphela, okanye kwimizuzu eyi-12 uza kufika kwi-Central Station.
Ndikunqwenelela indawo entle kakhulu!
Indawo ethandwayo, i-Midsommarkransen - i-Telefonplan - i-Aspudden, ineevenkile ezininzi zokutyela, iibhari, iivenkile zokutyela ezintle, i-design- nee-vintage-shop neepaki eziluhlaza. Isikolo esikhulu sobugcisa uKonstfack, kunye nendawo enkulu yokunyuka nayo ifumaneka apha.
Ukuba ufuna ukuqubha, ukuqesha i-kayak okanye wonwabele nje umoya wolwandle kunye nendalo epholileyo, yimizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 kuphela xa uhamba ngeenyawo ukuya kwiVinterviken entle, ulwandle lwaseMälaren. Apho uza kufumana nomzi-mveliso wakudala weWinterviken, apho u-Allyson uNobel ebesebenza khona ngexesha...
Ndiza kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ndincede ukuba unemibuzo malunga neflethi okanye indawo ekujikelezileyo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam!